Jhula - Luxury river view villa | Ilali yeNdalo
Umlambo ozolileyo ngasebalcony, ukutshona kwelanga okuhle, ilali ebonakala ngathi ikhe yaphumla kumashumi eminyaka eyadlulayo, ikhaya leholide oya kuhlala ubuyela kulo. UJhula yayiliphupha lam lobuntwana, isitudiyo sanamhlanje esivulekileyo esijonge emlanjeni esinebalcony ebanzi. Yakhelwe kwibala le-13 leesenti elijonge kumlambo iMuvattupuzha entle, iJhula likhaya leeholide eligqibeleleyo ukuya kuthi ga kwi-2 yabantu abadala kunye nomntwana. Ikhaya leeholide lifumaneka ngokufanelekileyo kwisiqingatha seyure ukusuka eKakkanad, eKochi.
Indawo yokulala enye. Eyenziwe yala maxesha enebhedi enkulukazi kumgangatho omkhulu kunye neebhedi ezongezelelweyo zibonelelwa ngesicelo. Intambo yeTV inikezelwe.
Igumbi lokuhlambela elinye livalwe neshawari ethe gabalala encanyathiselwe kwigumbi lokulala. Sibonelela ngesomisi seenwele, iitawuli ezongezelelweyo, iilinen ezongezelelweyo, kunye nezinto zangasese. Ulibele ibhrashi yamazinyo, incakuba, izinto zosula ubuso, njl. Sukuba nexhala sinazo ezo zakho nje ukuba kunokwenzeka!
Le khitshi yembono evulekileyo ixhotyiswe ngokupheleleyo ngezixhobo ezipheleleyo. Yiba nesidlo esimnandi esiphekwe ekhaya kunye nosapho kunye nabahlobo bakho.
Iveranda enkulu yokuphumla phantsi kwe-arbor enezihlalo ezitofotofo.Irenti zeholide apha zimbalwa kunezinye iindawo zechibi ezidumileyo, oku kuthetha ukuba indlu yakho yasehlotyeni iya kuba neyona mfihlo inkulu.Oku kuthetha ukuba ngasese okuninzi kunye nokuzola Udonga lwabucala lukhona ukwenza indawo njenge ngasese njengoko kunokwenzeka kuba indlu enkulu ibonakala ukusuka kumgangatho. Sineendawo zokuhlala ezininzi zamaqela amakhulu kunye ne-grill kunye neziko. Ukuba uvela esixekweni, uya kumangaliswa kamnandi sisibhakabhaka sasebusuku.
Siye sayila indawo epholileyo yokufunda, ukudlala imidlalo yebhodi okanye ukuthatha nje kancinci.
Sinobubele kwisilwanyana sasekhaya kwaye asinangxaki ukuba uza nomntwana wakho woboya. Sibiza umrhumo omncinci ngesilo-qabane sakho. Le yintlawulo ethunyelwa emva kokuba ubhukishe. Iyafuneka kwixesha elongezelelweyo lokucoca elithathayo xa isilwanyana sisekhaya! Ipropathi ikhuselwe kakuhle ngoko akukho mfuneko yakukhathazeka.
Zive ukhululekile ukusebenzisa nantoni na oyifumana endlwini, sicela kuphela ukuba uyibuyisele ngendlela oyifumene ngayo.
Iitempile zembali kunye neecawe, amasimi epaddy, amasimi erabha kunye nokulima kwemifuno Ngaphesheya komlambo, ezona venkile zintle zotoddy kunye nokutya kwilali.
Iqela lethu eJhula lineliso leenkcukacha, kwaye sihamba ngaphezulu nangaphezulu ukwenza ukuhlala kwakho kungalibaleki. Sinemigangatho ephezulu yamakhaya ethu, ngoko uyazi xa ufika, indawo yakho yokufihla intloko iya kuba ingenabala, kwaye igcinwe ngayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale ubumnandi. Elinye lamalungu eqela lethu liya kuqhagamshelana nawe ukuze liphendule nayiphi na imibuzo kwaye lenze ukufika kwakho kube lula kangangoko kunokwenzeka.
Iqela lethu eJhula lineliso leenkcukacha, kwaye sihamba ngaphezulu nangaphezulu ukwenza ukuhlala kwakho kungalibaleki. Sinemigangatho ephezulu yamakhaya ethu, ngoko uyazi xa ufika,…